WARBIXIN: Siday Ku Bilaabantay Colaada Antonio Conte Vs Jose Mourinho?, Iyo Taxanihii Qaabkii Ay Iskugu Soo Jawaabeen Ee Aflagaadada Gaadhay Ka Hor Kulanka Old Trafford. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Siday Ku Bilaabantay Colaada Antonio Conte Vs Jose Mourinho?, Iyo Taxanihii Qaabkii Ay Iskugu Soo Jawaabeen Ee Aflagaadada Gaadhay Ka Hor Kulanka Old Trafford.
February 25, 2018 Mahamoud Batalaale
Jose Mourinho iyo Antonio Conte ayaa afar kulan oo kaliya iskaga horyimid kooxaha ay hadda kala maamulaan ee Manchester United iyo Chelsea, laakiin waxay noqdeen labadii tababare ee Premier League ka wada shaqeeya ee erayada ugu xun isku dhaafsaday saxaafada. In afar kulan oo kaliya ay soo wada ciyaareen waqtigooda England iyo qaabka ay colaadoodu gaadhay ayaa ah laba arimood oo gabi ahaanba kala duwan.
Labada tababare waxay barri oo axad ah ku balansan yihiin Old Trafford waxayna iska hor imanayaan iyada oo xaaladooda colaadeed soo gaadhay halkii ugu xumayd waana sabab si wayn loogu sugayo kulanka Manchester United iyo Chelsea iyada oo la sugayo waxa Conte iyo Mourinho dhex mari doona.
Haddaba shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa taxanihii colaada Jose Mourinho iyo Antonio Conte, sidii uu ku bilawday iyo qaabkii ay ku soo xumaadeen erayadii ay isku soo adeegsadeen iyada oo ugu danbayn aan soo gaadhi doono xaalad aan laga filan karin laba tababare oo kooxo waa wayn maamula.
Siday Colaada Mourinho Vs Conte Ku Bilaabtay?
Kulankii ugu horeeyay ee ay Jose Mourinho iyo Antonio Conte iskaga hor yimaadeen labadooda kooxood ee hadda waxa uu ahaa October 2016 markaas oo ay Manchester United marti ku ahayd Stamford Bridge, laakiin Mourinho oo markii ugu horaysay isaga oo Red Devils hogaaminaya soo fadhiistay kursiga kaydka kooxdiisii hore ee Blues ayaa arkay iyada oo kooxdiisa 4-0 lagu xasuuqay.
Markii ay ciyaartu soo dhamaatay Mourinho ayaa Conte u sheegay: “May ahayn in aad sidaa u dabaal degto markii ay ahayd 4-0, waad samayn kartaa 1-0 markay tahay, haddii kale anaga ayay bahdilaad nagu tahay”. Wuxuuna markaas Mourinho ka cadhaysnaa in Conte uu kiciyay jamaahiirta Stamford Bridge si ay kooxdiisa xoog ugu taageeraan kadib gumaadka ay Mourinho u gaysteen.
Qaabkii Uu Mourinho kooxdiisii hore Ee Chelsea uu ugu duray koox Difaacasho:
Jose Mourinho oo aan ilaawin qaabkii loo soo ceebeeyay ayaa Chelsea ku tilmaamay koox difaacasho badan oo ciyaartoy badan kubbada ku difaacata taas oo aanu Conte jeclaysan qaabka uu macalinka ree Portugal kooxdiisa uga hadlay.
Mourinho oo wixii isaga lagu caayi jiray Conte u wareejiyay ayaa yidhi: “Chelsea waa koox aad ugu fiican difaacashada. Ciyaartoy badan ayay si aad u fiican ugu difaacdaan, waxaan filayaa xaaladan in kooxda aadka ugu fiicaashada fiican ay goolal weerar deg deg ah iyo kubbadaha sare koobka ugu guulaysan karto, sidaa daraadeed, anigu ma filayo in ay ka baxsan doonto laakiin kubbada cagtu waa kubbada cagta”.
Qaabkii Mourinho Uu Ander Herrera Ugu Calaamadiyay Eden Hazard:
Chelsea ayaa markale Manchester United ku soo garaacday kulankii FA Cupka laakiin Jose Mourinho ayaa kadib sameeyay qorshe uu Ander Herrera ugu adeegsaday in uu ku joojiyo Eden Hazard, wuxuuna xidiga ree Spain amaray in aanu shaqo kale oo aan Hazard ahayn qaban, wuxuuna noqday qorshe guulaystay.
Laakiin Antonio Conte oo tatikada Mourinho ka cadhaysan isla markaana ku durayay in xataa qaladaad lagu joojinayay Hazard ayaa yidhi: “Isagu ciyaarta ayuu ku bilawday, laakiin muu ciyaari karin kubbada cagta, qof kastaaba wuu arki karayay tan, sidaa daraadeed xukuma xaalada”.
Weerarkii Conte ee Lacagta Uu Mourinho Suuqa Galiyay Iyo In Aanu Koobka Ku Guulaysan:
Antonio Conte ayaa markiisa Jose Mourinho ku duray lacagtii badnayd ee ay kooxdiisu suuqa galisay halka uu sidoo kale ugu duur xulayay maamulka kooxdiisa aan dhaqaalaha uu doonayay ku taageerin.
Antonio Conte ayaa markaas saxaafada u sheegay: ” Waxaan filayaa in xili ciyaareedkan ay aad muhiim u tahay in la fahmo in markasta ayna guulaysan cida lacagta guu badan kharash garaysaa, haddii kale xili ciyaareedkan kooxda horyaalkan ku guulaysan lahayd may ahaateen, Chelsea, Tottenham, Arsenal ama Liverpool, waad fahmaysaan?”.
Conte oo labada Manchester israaciyay ayaa balse Mourinho si gaar ah ugu jeeday ayaa yidhi: “Xili ciyaareedkan oo kaliya ma aha in kooxaha ree Manchester ay lacago badan kharash gareeyeen, eega waqtigii hore, waa wax caadi ah”.
Weerarkii Mourinho Ee In Conte Uu Timo Beertay:
Jose Mourinho ayaa macalinka ree Talyaani ku duray in timihiisii uu lumiyay isla markaana uu ku cusub beertay wuxuuna yidhi: “Anigu ma ogi. Anigu siyaabo kale duwan ayaan uga jawaabi karaa, laakiin ma doonayo in aan timahayga ku lumiyo ka hadlida Antonio Conte”.
Colaadii Sanadkan Cusub Ee Bishii January:
Haddii intii hore ay ahayd erayo duur xul ah iyo dhacdooyin aan xumaan u badnayn waxay Mourinho iyo Conte xifiltankooda u qaadeen heer kale oo ka baxsan anshaxa kubbada cagta waxayna bilaabeen in ay lumiyaan ixtiraam badan oo laga filayay laba tababare oo kooxo waa wayn hogaaminaya.
Jose Mourinho ayaa si aan hore loo arag Antonio Conte ugu weeraray in uu qayb ka ahaa fadeexaadii horyaalka Talyaaniga ee kulamada la sii go’aamiyay natiijadooda taas oo uu Conte ku duray in kubbada cagta looga ganaaxay isaga oo erayo aad u culus oo uu si gaar ah u soo xushay ku weeraray.
Jose Mourinho ayaa yidhi: ” Waxa aan waligay aniga igu soo dhicin isla markaana aan waligay igu dhici doonin waa in la igu ganaaxay in aan sii go’aamiyay natiijada kulamo. Taasi waligay aniga igumay dhicin, igumana dhici doonto!”.
Antonio Conte oo si cadho leh ugu jawaabaya Mourinho ayaa yidhi: “Waxaan filayaa marka ay jiraan nooca hadaladan oo kale ahi in marka hore aad si fiican u ogaato waxa ay xaqiiqdu tahay. Waxay xaqiiqdu tahay in afar bilood Sportska la iga ganaaxay ee in anaan ka warbixin cadaalada Sportska, kadib waxaan dalbaday maxkamadayn dhab ah kadib waxay cadeeyeen in aanan wax danbi ah lahayn”.
“Waxaan filayaa in aad ka fikirto ka hor inta aanad sheegin nooca hadaladan oo kale ah, ka hor inta aanad qof kale dhaawicin, waxaa waajib kugu ah in aad dareen wayn siiso, waxaad muujisay in aad nin liita tahay, waxaa tahay nin liita, adigu waxba si fiican ugama ogid waxa ay xaaladu tahay. Laakiin anigu si fiican ayaan waqtigii tagay isaga u aqaanay. Waqtigii la soo dhaafay isagu waxa uu ahaaa liita ee duruufo badan, hadda waa liita isla markaana waan hubaa in uu mustaqbalka sii ahaan doono nin liita”.
“Sidoo kale hadii uu doonayo in uu badalo dhaqankiisa, laakiin shaqsigu waa kan, waa Mourinho, si fiican ayaad isaga u garanaysaan, heerkiisu aad ayuu u hooseeyaa, waan ku celinayaa; waxaan filayaa in ka hor inta aanad hadlin aad si fiican uga fikirto wixii dhacay”.
“Tani ma aha dhibaatadayda, anigu waxaan isaga u tixgaliyaa sidii uu yahay nin liita, anigu waxaan isaga u tixgaliyaa nin taariikhdiisu hoosayso, waxaa jirta sheeko ka haadlaysa aniga iyo isaga, sheekada waad badali kartaa, laakiin waxaa waajib kugu ah in aad sheekada si fiican u garanayso ka hor inta aanad qof kale wax yeelin, waqtigii ugu danbeeyay waxa uu la dhibtoonayay xusuus la’aan (amnesia)”.
” Tusaale ahaan waxaan xusuustaa tusaalihii doqoniimada ahaa ee uu u soo qatay Ranieri, markii uu Ranieri ku weeraray luuqadiisa Ingiriisida, kadib markii Ranieri shaqada laga caydiyay waxa uu soo xidhay garan uu ku soo qoray Ranieri. Been abuur ayaad tahay!”.
“Xaaladani aad ayay u cadahay, ma jirto wax aan kala cadaynayaa. Waa goorma kulanka United? Waxaanu ku kulmi doonaa qol, si aan ugu sharaxo hadaladan, anigu ma ogi haddii uu isagu diyaar u yahay in aanu qol ku kulano oo ah aniga iyo isaga oo kaliya”.
Maxaa Laga Filan Karaan Kulanka Old Trafford?
Iyada oo ayna suurtogal ahayn in la soo koobi karo erayadii badnaa iyo weeraradii ay Mourinho iyo Conte ay saxaafada isku soo dhaafsadeen, waxaa hadda la sugayaa waxa kala qabsan doona labada tababare marka ay Old Trafford iskugu soo galaan inkasta oo qaar ka mid ah saxaafada England ay sheegayaan in Mourinho uu xaalada badali doono isla markaana uu si aan cadho lahayn ku qaabi doono Conte.